မိန်းကလေးတွေကို ပြန်ပေးဆွဲ သားမယား ပြုကျင့်ခဲ့သူ အဆုံးစီရင်သွား
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်တုန်းက အမျိုးသမီးငယ် သုံးယောက်ကို ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပြီး ဆယ်စုနှစ် တခုနီးပါး သားမယား ပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အိုဟိုင်းရိုး ပြည်နယ်က Ariel Castro အေရီရယ် ကတ်စရို ဆိုသူဟာ ထောင်ထဲမှာ အိပ်ရာခင်းစကို သုံးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားတယ်လို့ သေမှုသေခင်း အရာရှိတယောက်က အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
သူ့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တလတုန်းကမှ သေဒဏ် ချမှတ်ခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာ ကတ်စရိုကို ထောင်ထဲမှာ အစောင့်အရှောက်နဲ့ ထားတာ ဖြစ်ပြီး နာရီဝက် တခါ စစ်ဆေးနေတာ ဖြစ်ပေမယ့် အမြဲမပြတ် ကြည့်ရှု နေတာတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
သူ့ကို စိတ်ရောဂါ ဆရာဝန်နဲ့ ကုသခွင့် ပေးဖို့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့် ထောင်အာဏာပိုင်တွေက ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ သူ့ရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။
သူဖမ်းဆီး ပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထဲက တယောက်က ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး အိမ်နားက လူတွေကို အကူအညီတောင်းမှုကြောင့် သူ့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ မေလတုန်းက ဖမ်းမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လာရုစ်မှာ မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါကို အင်တာနက်မှာ မဲထည့်လို့ရပါပြီ။
Miss Internet ဆု အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
တခါထည့်ရင် ၁ဝ မဲ ပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ပါ။
သို့သော်လည်း မဲထည့်တာ အခမဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ၁ဝ မဲ အတွက် ၅ ဒေါ်လာ ကုန်ပါမယ်။
ဒီတော့ ခရက်ဒစ်ကတ်/ဘဏ်ကတ် သုံးရပါလိမ့်မယ်။
http://www.misssupranational.com/VotingPage.html ကို သွားရင် အထက်ပါအတိုင်း လျှောက်လွှာဖြည့်ရမှာပါ။
လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်ပြီးရင် Vote ဆိုတာကို ကလစ်လိုက်ပါ။
ကိုယ့်အီးမေးကို အောက်ကစာ ရောက်လာတာ သိပ်မကြာခင်မှာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Current status of the transaction ( OrderID: frtruf9 ) amounting to 5.00 U.S.$, made at "misssupranational.com" Payment Point is: start.
If you have any questions or problems regarding the transaction,
or phone: +48 32 7641832
Vote ကလစ်ပြီးရင် ချက်ချင်း ပေါ်လာမှာကတော့ အထက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့အကွက်တွေပါပဲ။
အဲဒီမှာ လိုအပ်တာတွေကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ခရေပွင့်ပြထားတာတွေက မဖြစ်မနေ ဖြည့်ရမယ့်အကွက်တွေပါ။
ဆိုခဲ့သလိုပဲ .... ၁ဝ မဲ အတွက် ၅ ဒေါ်လာ ကုန်မယ်၊ များများထည့်ရင် များများ ကုန်ပါမယ်။
ဒီငွေတွေ ဘယ်ကို ရောက်မှာလဲ။
Miss Supranational ပြိုင်ပွဲကို စီစဉ်တဲ့သူထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Nowa Scena ဆိုတဲ့သူဆီကို ရောက်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ Payment to Nowa Scena sp. z o.o. လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အပြည့်အစုံ၊ ဘဏ်ကတ် အကြွေးကတ် အချက်အလက်များ သူတို့ကို ပေးရမှာ ဆိုတော့ ဒီအချက်အလက်တွေ လုံခြုံရေးက စိတ်ချရပါ့မလား။ အင်း... ဒါကတော့ အဲဒီ မဲ စပြီး ထည့်တဲ့ စာမျက်နှာမှာ ပါတဲ့ စည်းကမ်းချက်များကို ဖတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ မိနစ်ပိုင်းအထိတော့ မြန်မာပြည်သားတွေက မဲအများဆုံးပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
အခုချိန်အထိတော့ Miss Internet ဆု အတွက် မဲရောင်းချမှုမှာ ခင်ဝင့်ဝါကို အားပေးသူတွေ အများဆုံး ၀ယ်ယူနေတာ တွေ့ရမှာပါ။
ဆိုခဲ့သလိုပဲ ... လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ မိနစ်က သူ ရရှိထားတဲ့ မဲအရေအတွက် 2,180 ရှိပါတယ်။
အခု ဒီပို့စ်ကို အင်တာနက် တင်မယ့်အချိန် ကြည့်လိုက်တော့ 2240 ရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ခင်ဝင့်ဝါကို အားပေးသူတွေ ဘဏ်ကတ်၊ အကြွေးဝယ်ကတ်တွေသုံးပြီး မဲထည့်မှုဟာ ဒီထက်ပိုပြီး များလာဖွယ် ရှိပါတယ်။
မဲဝယ်နိုင်တာ နက်ဖန် နောက်ဆုံးပါပဲ။
နက်ဖန် ဗိုလ်လုပွဲရက် ကျော်ရင် မဲဝယ်လို့ ရကောင်း ရနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ပွဲက ပြီးသွားပြီဆိုတော့ မဲတော့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။
မဲမရပေမယ့် ကိုယ့်ပိုက်ဆံကတော့ ပွဲစီစဉ်သူများ ယူသွားမှာ သေချာသလောက် ရှိပါတယ်။
သူတို့ ရမယ့် ငွေတွေကလည်း ပြိုင်ပွဲကုန်ကျစရိတ်အတွက် သုံးမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Miss Supranational ပြိုင်ပွဲကို စီစဉ်သူတွေက သူတို့ဝက်ဆိုက်ကနေ တရားဝင် မဲပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကို ပြီးခဲ့တဲ့နာရီပိုင်းလေးတင် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲက ဗိုလ်လုပွဲနားကပ်နေပြီ၊ အခုမှ ဒီလို စီစဉ်တယ်ဆိုတော့ သူတို့ဆီမှာ နည်းပညာအခက်အခဲ ဖြစ်နေတာများလား။
မဲထည့်နိုင်မယ့် နေရာက http://www.misssupranational.com/VotingPage.html ဖြစ်ပါတယ်။
မဲထည့်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကို ဒီ ဧရာဝတီဘလော့ http://blog.irrawaddy.org/ မှာ လာမယ့်မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဖော်ပြပေးပါမယ်။
အခုတော့ မြန်မာပြည်က သွားပြိုင်တဲ့ ခင်ဝင့်ဝါကတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ ပရိသတ်ကြီးကို အခုလို ပြောပြထားပါတယ် …
ညီမ အစက official voting မှာ မဲရဖို့ မမျှော်လင့်ခဲ့မိပါဘူး။
အဲဒါကလည်း ညီမကိုချစိတဲ့ပရိသတ်ကြီးကို စော်ကားတဲ့စိတ်နဲ့တွေးမိတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Credit/Debit Card အွန်လိုင်းငွေချေစနစ်ဆိုတာ မတွင်ကျယ်သလို ပရိသတ်ကြီး ပိုက်ဆံကုန်မှာစိုးလို့ ပါ။
နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာက နိုင်ငံသားတိုင်းမှာက credit/debit card အားလုံးမှာရှိကြတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် မမျှော်မှန်းရဲခဲ့တာပါ။
အခု ညီမကို ချစ်တဲ့ ပြည်ပက မြန်မာမျိုးချစ်ပရိသတ်ကြီးတွေက ညီမအတွက် ပိုက်ဆံတွေအကုန်ခံပြီး မဲပေးကြတဲ့အတွက် ညီမ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရပါတယ်ရှင့်။
ပရိသတ်ကြီးတို့ ကုန်သွားတဲ့ပိုက်ဆံတွေ အလကား မဖြစ်ရအောင် ညီမ Miss Internet ဆုရခဲ့ရင် ဆုရတဲ့ငွေ အားလုံးကို ပရဟိတလုပ်ပြီး လှူပါမယ်ရှင့်။
ညီမကို မျှော်လင့်ချက် အားမာန်တွေယုံကြည်မှုတွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေ အမြဲပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ ကျေးဇူးကို ညီမမမေ့ပါဘူး။
နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ Miss Myanmar တစ်ယောက်ဖြစ်စေရမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်ရှင်။ ပရိသတ်ကြီးကို အရမ်းချစ်ပါတယ်ရှင့်…..
ရန်ကုန်မြို့ ပြဖွံ့ ဖြိုးမှုစီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သော မင်းဓမ္မလမ်း ဒုတိယဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်ပုံစံ ရေးဆွဲပြီးဖြစ်
ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မင်းဓမ္မ လမ်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ဒုတိယဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းပုံစံ (Plan) အား ရေးဆွဲပြီးဖြစ်ကြောင်း ယင်းစီမံ ကိန်းရေးဆွဲသူ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီ(YCDC)၊ အကြံပေး၊ မြို့ပြ စီမံကိန်းပညာရှင် ဒေါက်တာကျော်လတ်က မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
ယင်းစီမံကိန်းအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာအကူအညီပေးခြင်းများ ရပ် ဆိုင်းလိုက်သော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါစီမံကိန်းအား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ(YCDC)က ရပ်ဆိုင်း ထားခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်အကောင်အထည် ဖောေ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
ဒေါက်တာကျော်လတ်က ''မင်းဓမ္မလမ်း ဒုတိယစီးပွားရေးဇုန်ကို ဆက်လုပ်နေတယ်။ ပုံ လည်း ဆွဲပြီးသွားပါပြီ။ ဂျပန်က မကူညီဘူး ဆိုပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ မူလက အကူအညီပေးမည် ဆိုသည်မှာ ရေပေးရေးစီမံကိန်း၊ လမ်းဖောက် လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းပညာရပ်များ ကူညီပေး မည်ဟု ဆိုထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင်မူ မကူညီတော့ဟု ဆိုခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ဒေါက် တာကျော်လတ်က ဆက်လက်ပြောသည်။
စီမံကိန်းကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီ(့ဃီဃ)ပိုင်မြေများနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနပိုင် မြေဧရိယာများတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ပြီး အခြားဝန်ကြီးဌာနပိုင် မြေဧရိယာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ(YCDC) ပိုင် မြေ ဧက ၅ဝ-၆ဝ ဝန်း ကျင်ရှိပြီး အခြားဝန်ကြီးဌာနပိုင် မြေဧက ၂ဝဝ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိသည်။ အဆိုပါဒုတိယစီးပွားရေး ဇုန်စီမံကိန်းတွင် ဟိုတယ်များ၊ ရှော့ပင်းမော များနှင့် အိမ်ရာများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းအတွက် ပါဝင်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (YCDC) မှ ငှားရမ်း ထားသည့်ှိ မင်းဓမ္မ လမ်းရှိ ပန်းဆိုင်များအား သာကေတမြို့နယ်ရှိ ယမုံနာ လမ်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း တွင် ညွှန်ကြားထားသော်လည်း အချို့ပန်းဆိုင် များမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ ပြောင်းရွှေ့ရခြင်း မရှိသေးကြောင်း ပန်းဆိုင်များမှ သိရှိရသည်။
မင်းဓမ္မ ဒုတိယဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်သည် ရန်ကုန်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သည့် ၂ဝ၁၈ မဟာရန်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရန် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအနက် မြို့ပြဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍတွင် အဓိကပါဝင်သော စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ(YCDC)မှ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်၍ ၁၂ ဘီးကုန်တင်ယာဉ် ဇေယျဝတီနတ်စင်ချောင်း အတွင်း ထိုးကျ
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ဖြူးမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန် - မန္တလေး ကားလမ်း မိုင်တိုင် အမှတ် (၁၄၅/၁) ကြား နတ်စင်ချောင်း တံတားအနီး တောင်ဘက် ကပ်လျက်တွင် ရန်ကုန်မှ မွေးမြူရေး ကြက်စာများ တင်ဆောင်၍ မန္တလေး ဘက်သို့ မောင်းနှင် လာသော နစ်ဆန်းထရပ် ၁၂ ဘီးယာဉ် သည်
ယမန်နေ့ နံနက် ၄ နာရီ ခန့်တွင် ယာဉ်မောင်း အိပ်ငိုက်၍ နတ်စင် တံတား ၀ဲဘက်ချောင်း ထဲသို့ ထိုးကျ ခဲ့သဖြင့် ယာဉ်၏ ရှေ့ဘီးများ ပြုတ် ထွက်ပြီး ရှေ့ပိုင်း ပျက်စီးသွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်မောင်း နှင့် ယာဉ်နောက်လိုက် မှာ မော်တော်ယာဉ်အား အခင်းဖြစ် သည့် နေရာတွင် ထားခဲ့ပြီး ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် သွားသဖြင့် အမှုကို ဇေယျဝတီ ရဲစခန်း မှ ယာဉ် (ပ) ၁၁/ ၂၀၁၃ ပြစ်မှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၇၉ အရ အမှုဖွင့်လှစ်၍ စုံစမ်း စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အွန်လိုင်းမှာ ဓာတ်ပုံပြင်ရန် အကောင်းဆုံး ဝဘ်ဆိုဒ် ၅ ခု
Photoshop Skill မရှိလို့ ဓာတ်ပုံမပြင်ရတော့ဘူးဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး။ Third Party App ကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဖုန်းမှာလည်း ဖုန်း အလျောက်၊ ကွန်ပြူတာမှာလည်း ကွန်ပြူတာ အလျောက် ပုံပြင်လို့ ကောင်းတဲ့ ဆိုဒ်တွေ အများကြီးပါ။
သုံးရလည်း လွယ်သလို၊ ဓာတ်ပုံကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ခပ်ကောင်းကောင်း ပြင်လို့ ရပါတယ်။ ဒီတော့ အွန်လိုင်း ဝဘ်ဆိုဒ်ကနေ ဓာတ်ပုံ ပြင်ဖို့အတွက် ခေါင်းစားနေသူများအတွက် လူသုံးများတဲ့ ဆိုဒ် များကို မျှဝေ ပေးလိုက် ရပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် နေရာအများအပြားတွင် ရေကြီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ Commonwealth Drive နှင့် Commonwealth Avenue၊ Alexandra Road, Lorong Kismis, South Bridge လမ်းနှင့် Maxwell လမ်းဆုံ၊ Cuscaden လမ်းနှင့် Tomlinson လမ်းဆုံ၊ Ayer Rajah Expressway အမြန်လမ်းမ တစ်လျှောက်တို့တွင် ရေကြီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း Channel NewsAsia
သတင်းက ပြောကြားသည်။ ရေကြီးမှုကြောင့် ယာဉ်အသွားအလာ ပိတ်ဆို့ကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာမှုတွေ အရ ဖုန်းဘတ်ထရီများကို
ညောင်ရွက်ဖြင့် အားသွင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သို့သော်လည်းပဲ ယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာ အလွန်နည်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူတွေ အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်အောင်
အောက်ပါ အတိုင်း ညွှန်ပြထား ပါတယ်။
၁။ ဖုန်းကာဗာကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
၂။ ဖုန်းဘတ်ထရီကို ယူပါ။
၃။ စိမ်းစိုနေသော ညောင်ရွက်နှစ်ရွက်ကို ယူလိုက်ပါ။
၄။ ညောင်ရွက်၏ အရိုးကို ဘတ်ထရီ၏ ထိပ်သို့ ပုံမှာ ပြထားသည့် အတိုင်း
မီးနစ် အနည်းငယ် ထိုးလိုက်ပါ။
၅။ အဝတ်သန့်သန့်ဖြင့် ဘတ်ထရီကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါ။
၆။ ဘတ်ထရီကို ဖုန်းထဲသို့ ပြန်ထည့်လိုက်ပါ။
၇။ ထို့နောက် ဖုန်းကို ဖွင့်ပါ။
၈။ ထိုအခါ ဖုန်းအားများ ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
ဖုန်းအားသွင်းဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်သော တောတောင်ထဲမှာ
ဖုန်းဘတ္ထရီ မရှိပါက အထက်ပါ ဖော်ပြပါ အတိုင်း ပြုလုပ်ပါက
မိမိ၏ ဖုန်းအားကို ပြည့်လာစေပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် ညောင်ရွက်ကလွဲပြီး
အခြားအရွက်များဖြင့် အသုံးပြုလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ရုက္ခဗေဒ ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ သစ်ပင်တွေမှာ ရှိတဲ့ စွမ်းအင်တွေနဲ့
လျှပ်စစ် စွမ်းအင်တွေဟာ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ပြန်အလှန် ဆက်စပ်နေတယ်လို့
ခင်ဝင့်ဝါ ကို စက်တင်ဘာ၆ရက်နေ့ နေ့လည်၁၂နာရီ မပိတ်ခင် Vote ပေးလို့ရနိုင်
2310ကျော်မဲရနေလို့ votingဇယားတောင်ဆန့် ပါဦးမလား၊ဒါပေမဲ့ (မနက်ဖြန်
“ညီမ အစက official voting မှာ မဲရဖို့ မမျှော်လင့်ခဲ့မိပါဘူး။
နဲ့တွေးမိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Credit/Debit
Card အွန်လိုင်းငွေချေစနစ်ဆိုတာ မတွင်ကျယ်သလို ပရိသတ်ကြီးပိုက်ဆံကုန်မှာစိုးလို့ ပါ။ နောက်ပြီး
နိုင်ငံတကာက နိုင်ငံသားတိုင်းမှာက credit/debit card အားလုံးမှာရှိကြတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် မမျှော်မှန်းရဲခဲ့တာပါ။
အခု ညီမကို ချစ်တဲ့ ပြည်ပက မြန်မာမျိုးချစ်ပရိသတ်ကြီးတွေက
ညီမအတွက် ပိုက်ဆံတွေအကုန်ခံပြီး မဲပေးကြတဲ့အတွက်
ညီမ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရပါတယ်ရှင့်။ ပရိသတ်ကြီးတို့ ကုန်သွားတဲ့ပိုက်ဆံတွေ အလကား
မဖြစ်ရအောင် ညီမ Miss Internet ဆုရခဲ့ရင် ဆုရတဲ့
ငွေအားလုံးကို ပရဟိတလုပ်ပြီး လှူပါမယ်ရှင့်။ ညီမကို
မျှော်လင့်ချက် အားမာန်တွေယုံကြည်မှုတွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေ အမြဲပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ ကျေးဇူးကို ညီမမမေ့ပါဘူး။
နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ Miss Myanmar တစ်ယောက်ဖြစ်စေရမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်ရှင်။
ပရိသတ်ကြီးကို အရမ်းချစ်ပါတယ်ရှင့်....”လို့ 
သူ့ ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာKhin Wint Wahမှဆိုပါတယ်။
official votingကိုမပိတ်ခင်ထိVoteပေးလို့ရနိုင်သေးတယ်လို့ 
ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဆွစ်ဇာလန်အစုိုးရက နှစ်စဉ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅ သန်း ကူညီမယ် (video)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမုိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတုိုးတက်ရေး နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဆွစ်ဇာလန်အစုိုးရက နှစ်စဉ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅ သန်းအကူအညီပေးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံအဖြစ် ကန်တော်မင်ပန်းခြံကို ပြန်လည် နာမည်ပြောင်းရေး သဘောထားများ (video)
အိပ်မက်ဆုံရာ(၆)တွင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို မူရင်းတေးရေးဆရာက တရားဝင်ကန့်ကွက်မည်ဟုဆို
အိပ် မက်ဆုံရာအမှတ်စဉ်(၆) သီချင်း ဆိုပြိုင်ပွဲတွင် သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ သည့် တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်နှင့်ပတ် သက်ပြီး မူရင်းတေးရေးဆရာက တရားဝင်ကန့်ကွက်မှုများပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စက်တင်ဘာ၁ရက်နေ့တွင် ထုတ်လွှင့် တင်ဆက်သွားသော အိပ်မက်ဆုံရာအမှတ်စဉ်(၆)၏ Own Tune Week တွင် ဒိုင်များ ရွေးချယ်ပေးသောတေးသီချင်း ဖြစ်သည့် ''အတားအဆီးမရှိ''ဟူသော တေးသီချင်းနှင့်ပတ် သက်၍မူရင်းတေးရေးဆရာများ ဖြစ်သော အယ်သာနှင့်လူမွန်တို့ ကယင်းတို့၏ တေးသီချင်းများကို ခွင့်တောင်းခံခြင်းမရှိဘဲအသုံး ပြုသွားခြင်းအပေါ် ဂီတအစည်း အရုံးမှတစ်ဆင့်ကန့်ကွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တေးရေးအယ်သာက ''ကျွန် တော်တို့ဆီကို ဒီသီချင်းအသုံး ပြုမယ်ဆိုပြီး အကြောင်းကြား တာမျိုးလဲမရှိဘူး။ မနေ့ကမှ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်လိုက်တော့ အိပ်မက်ဆုံရာမှာ ဆိုနေတာကို တွေ့လိုက်တာ။ တအားကိုစိတ် ပူခဲ့ရတယ်။ စိတ်ပူတယ်ဆိုတာ ကလဲ ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ သီချင်းကို အခုသူတို့ဆိုတော့မယ်။ ပြီးရင် သူတို့ရှိုးပွဲတွေမှာဆိုမယ်။ ဒီဘက်မှာလဲ ကျွန်တော်တို့က အခွေထွက်ဖို့လုပ်ထားကြတော့ သူတို့အဲဒီလိုလုပ်တာက ကျွန် တော်တို့ကို သိပ်ကိုထိခိုက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က မနက်ဖြန်ဂီတအစည်းအရုံးကို သွားပြီးတော့ တရားဝင်ကန့်ကွက် မယ်။ ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာက လဲပိုက်ဆံလိုချင်လို့ ကန့်ကွက်တာ မျိုးမဟုတ်ဘူး။ အခုအသုံးပြု သွားပြီးတာကတော့ ပြောလို့မရ တော့ဘူး။ နောက်နောင်ကျွန်တော် တို့သီချင်းကို အသုံးမပြုဖို့ဘဲ လုပ်သွားမှာပါ''ဟု ပြောသည်။
တေးရေးအယ်သာနှင့်လူ မွန်တို့သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ် ခန့်က MRTV-4\_ For Tune Channel တွင် စီစဉ်တင်ဆက် သည့် 'ကိုယ်ပိုင်တေးသီချင်းများ ပြိုင်ပွဲ'တွင်အဆိုပါတေးသီချင်း ဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ဆန်ခါတင်အဆင့်တွင် ပြုတ်ခဲ့ပြီးရွေးချယ်ခြင်းမခံခဲ့ရကြောင်း သိရ သည်။
''ဒီသီချင်းက အရွေးချယ် ခံရင်တော့ သူတို့အသုံးပြုခွင့်မရှိ ဘူး။ ကျွန်တော်တို့က စီးရီးခွေ ထုတ်ဖို့ရှိတယ်။ ဒီသီချင်းလဲပါ တယ်။ အခုပြိုင်ပွဲမှာ ဒီလိုဆို လိုက်တော့ နောက်ပိုင်းရှိုးပွဲတွေ မှာလဲဆိုမှာကို စိုးရိမ်တယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ် ယောက်ရဲ့ မူပိုင်သီချင်းပါ''ဟု တေးရေးအယ်သာက ထပ်မံ ပြောသည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် ရွေးချယ်ခြင်း မခံခဲ့ရသော တေးသီချင်းအား ယခုအခါတွင် Channel-7 ၌ ပြု လုပ်နေသော အိပ်မက်ဆုံရာ အစီ အစဉ်တွင် ဒိုင်များကရွေးချယ် ပေးခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် 'ရပ်ဆဲလ်'က သီဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
တေးရေးကိုနိုင်ဇော်က ''သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေက သူတို့ ဒီလတစ်လအတွက် သီချင်းတွေ သုံးမယ်။ အဲဒီအတွက်အစည်း အရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေကို ဆက် သွယ်ပြီး ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ဆို ပြီးပေးတယ်။ အဲဒီတော့အစည်း အရုံးက တေးရေးတွေကို ဆက် သွယ်ပြီးကျသင့်ငွေကို ရှင်းပေး ရတယ်။ အဲဒီစနစ်က နာမည်ရပြီး သားသူတွေအတွက် အဆင်ပြေ ပေမယ့်လဲ နာမည်မရှိသေးတဲ့ ကလေးတွေအတွက်ကျတော့ သူ တို့က ဘယ်ကိုဆက်သွယ်ရမလဲ မသိတာတွေဖြစ်တတ်ကြတယ်။ အခွေဖြန့်ထားတာကိုယူသုံးရင် ဂီတအစည်းအရုံးကနေတစ်ဆင့် ရှင်းလို့ရပေမဲ့ မဖြန့်ရသေးတဲ့ သီချင်းကို အသုံးပြုရင်တော့ အဲဒီ သီချင်းက ဘယ်ကပေါက်တာလဲ ဆိုတာ စုံစမ်းသင့်တယ်။ ပြီးမှ လုပ်စရာရှိတာကို ဆက်လုပ်သင့် တယ်။ သူတို့ကခွင့်ပြုချက်မရဘဲ တရားမဝင်သုံးတာဆိုရင်တော့ ခိုးယူသုံးစွဲတာအဲဒီအမှုက ပိုကြီး တယ်''ဟု ရှင်းပြသည်။
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ကို ထိန်ပင်သုသာန်က လှိုင်သာယာ အမှိုက်ပုံဘေးမှာ ပြန်လည်တွေ့ရှိခြင်း
အိပ်မက်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိန်ပင်ဆိုတာ ရန်ကုန်ကလူတွေ သိတယ်။ အသုဘဆိုရင်
ရေဝေးပို့ မယ်။ ထိန်ပင်ဆိုရင် “အင်” ချင်နေပြီ။ လမ်းကလည်း ကြမ်းသကိုး။
သွားလမ်းလာလမ်းကလည်း မဖြောင့်သကိုး။ ခလုတ်ကန်သင်း တောနဲ့ ဗွက်။
မနေ့ ကတော့ ထိန်ပင်ရောက်တယ်။ အသုဘသွားပို့ တာ မဟုတ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က
အဘဗိုလ်ဇင်ယော်ရဲ့ အိမ်ရောက်တော့ သူ့ အိမ်မှာ စကားပြောဖြစ်တယ်။
သမီးလတ် ရီရီဇင်ရယ်၊ အငယ်မ ၀ါဝါဇင်ရယ်။ အဘ ဟိုင်နန်ကျွန်းမှာ
သင်တန်းတက်တုန်းက ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့ ရတယ်။ ကောင်းပေါ့။ ဘီအိုင်အေ၊
ဘီဒီအေ၊ ပီဘီအက်စ် (ဖ်) က လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့ တယ်။
ပြီး အသက်ကြီးတော့ အဘဗိုလ်ဇင်ယော် ဆုံးတယ်။ သုံးရောင်ခြယ် နောက်ခံနဲ့ 
ဗိုလ်ဇင်ယော် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)၊ သခင်သန်းညွန့် ဆိုပြီး ကြံတောမှာ
အုတ်ဂူ သားသားနားနားနဲ့မြှုပ်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးလည်း တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။
အခု ကြံတောမှ မရှိတော့ဘဲ။ ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ သမီးငယ် ၀ါဝါက ပြောတယ်။
ထိန်ပင်ဆိုတာ လှည်းတန်းကနေ တက္ကစီငှားရင်တောင် လိုက်ချင်တဲ့ကား
ခပ်ရှားရှားရယ်။ လမ်းက ဝေးလည်းဝေး၊ ဆိုးလည်းဆိုးသကိုး။ ဈေးမပြောဘူး၊
မအားဘူးနဲ့မလိုက်ဘူးက အရင်ကြားရတာ။ အဆင်ပြေလို့ မောင်းပေးရင်
တစ်နာရီကျော် ကြာပါတယ်။ အဲဒီအရပ်ကို မနေ့ကျွန်တော်ရောက်တာပါ။
ဟိုရောက်တော့ မီးသဂြို င်္လ်စက်၊ အဲဒီကနေ လှမ်းပြီးတော့ လမ်းသိတဲ့
ကလေးတစ်ယောက်ကို မေးရတယ်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ် အုတ်ဂူတွေ ဘယ်နားမှာ
ရှိလဲလို့ ။ မီးသဂြို င်္လ်စက်ကနေ တောင်ဘက်ကို မီတာနှစ်ရာလောက်သွားရင်
အဲဒီမှာ အမှိုက်လာပစ်တဲ့ ကားတွေကို မှတ်တဲ့ ကားမှတ်စခန်းရုံး အသေးလေး
ရှိတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အမှိုက်ပုံ အကြီးကြီးရှိတယ်။ ရုံးဘေးမှာ
လူသွားလမ်းလေးရှိတယ်။ ရုံးနောက်ကို ဆယ်မီတာလောက် လမ်းလျှောက်လိုက်။
ပြီးရင် ရပ်။ ဗွက်မနစ်အောင် ဖိနပ်ချွတ်၊ ပုဆိုးတိုတိုဝတ်၊ ဖိနပ်ကို ခါးကြားထိုး၊
ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ ဆိုရင် ဒူးအထိလိပ်တင်၊ ရပြီ။ ညာကွေ့ ၊ တစ်ပေခွဲ နှစ်ပေ
အုတ်ဂူလေးတွေ စတွေ့ ရပြီ။ ဗွက်တော မြက်တောမှာ။
ဦးဆုံး စတွေ့ တာ ဗိုလ်လင်းယုန် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်)၊ အသက် ၅၄ နှစ် တဲ့။
အလျားနှစ်ပေ၊ အနံတစ်ပေခွဲ၊ အမြင့်တော့ ကိုးလက်မလောက် ရှိမပေါ့။
ဆက်လျှောက်ကြည့်မိတယ်။ ဗိုလ်စောနောင် (သိတာပေါ့၊ ရွှေတောင်တိုက်ပွဲမှာ
ကျဆုံးသွားတဲ့ ဗိုလ်စောအောင်ရဲ့ညီအစ်ကို၊ ရှမ်းအမျိုးသားတွေ)၊
နောက် ဗိုလ်မင်းခေါင်။ ပြီးတော့ ဗိုလ်တာရာ (ရဲဘ်ာသုံးကျိပ်ထဲက နာမည်ကြီး
မုဆိုးဝတ္ထု စာရေးဆရာပေါ့) နောက် ဗိုလ်မြင့်ဆွေ။ တစ်ခါ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ထဲမှာ
ဗိုလ်နာမည် မခံယူတဲ့ သခင်ထွန်းအုပ်။ ပြီးတော့ ဗိုလ်ဇင်ယော် (သခင်သန်းညွန့် )
ဆိုတာ ဖတ်လို့ ရတယ်။
နာမည်သိမထားတဲ့သူဆိုရင် ဖတ်လို့ ရမယ် မထင်ဘူး။ ၀မ်းနည်းစရာတော့
အကောင်းသား။ ကြံတောမှာတုန်းက အုတ်ဂူက နောက်ခံ သုံးရောင်ခြယ်နဲ့ ။
ခုတော့ ဘာအရောင်မှ မရှိတော့ပါ။ အမြင်မတော်လို့ ပါ။ တာဝန်ရှိတယ်ထင်ရင်၊
ရဲဘော်သုံးကျိပ် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ကျောက်တိုင်လေးတစ်ခု၊ နေရာလေးတစ်ခု၊
ကမ္ပည်းလေးတစ်ချပ်လောက်များ ရှိလေမလားလို့ ။
ရဲဘော်သုံးကျိပ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အမှတ်အသားလို့ ဘဲဆိုမလား။ ဟိုးအဝေးကြီးက
ဂျပန်ပြည်မှာတော့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ကို အဓိက ဦးဆောင်ပြီး စစ်ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့
ဗိုလ်မှူးကြီး ဆူဇူကီး (ဗိုလ်မိုးကြိုး)နေတဲ့ ရွာမှာ အထိမ်းအမှတ် အောင့်မေ့ဖွယ်
ကျောက်စာတိုင်လေး ရှိတယ်။ ရွာနာမည်က ဟာမမတ်စု (Hamamatsu) တဲ့၊
ရှီဇူအိုကနယ် (Shizuoka Prefecture) ကပါ။
ဗိုလ်မိုးကြိုးရဲ့ အုတ်ဂူလည်း အဲဒီမှာရှိတယ်။ သူ့ ဇာတိရပ်တဲ့။ နောက် ဂျပန်-မြန်မာ
ဗမာလို ရေးထားတယ်။ “ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး တည်မြဲပါစေ” တဲ့။
အောက်မှာတော့ ဂျပန်လို အများကြီးပေါ့။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက မြန်မာပြည်
စစ်မြေပြင်မှာ ဂျပန်စစ်သည် တစ်သိန်းခြောက်သောင်းခုနစ်ထောင်ကျော်
ကျဆုံးကြောင်း၊ အဲဒီထဲမှာ သူတို့ နယ်က စစ်သည် နှစ်ထောင့်ခုနစ်ရာကျော်
ပါဝင်ကြောင်း လှလှပပ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးပါ။ တဆက်တည်း ရေးသားထာတာက
ဒီအထိမ်းအမှတ်လေးဟာ ဗမာပြည်စစ်မြေပြင်မှာ အသက်ပေးသွားတဲ့
ဂျပန်စစ်သည်တွေရဲ့ ဝိညာဉ်တွေကို ဖြေသိမ့်ပေးနိုင်ဖို့ နဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ 
သမိုင်းအချက်အလက်တွေ ရေရှည်တည်တံ့စေဖို့ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးကိုလည်း ထာဝရ တည်တံ့စေရန် ရည်ရွယ်တယ်လို့ 
အဆုံးသတ်ထားတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ
ဗိုလ်မှူးကြီး ဆူဇူကီးနဲ့လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက် လျှို့ ဝှက်အစီအစဉ်
ချခဲ့ပါတယ် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်သမိုင်းရဲ့နိဒါန်းပေါ့)။ အားတော့နာတယ်။ အဲဒီတုန်းက
သူတို့ က ဖက်ဆစ်နော်၊ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူတို့ ရဲ့ စစ်သည်တွေကို ဂုဏ်ပြုတယ်။
ဇင်ယော်တို့ ၊ လင်းယုန်တို့လေထဲမှာ ပျံဝဲခဲ့တာ လူထုအတွက်။ ခုတော့..
မြောင်းထဲမှာ။ ဗွက်တော မြက်တော အမှိုက်တောမှာ။ ကျွန်တော် ကားဆီပြန်တော့
လိုက်ပို့ တဲ့ညီငယ်က “အစ်ကို ခြေထောက်ဆေးဦးလေ” တဲ့။ ဟုတ်သားဘဲ။
ထိန်ပင်က ပြန်ထွက်လာတော့ ရန်ကုန်ပြန်မယ့်ဘက်က “ဆံပင်ဝယ်သည်” လို့ 
ဆိုင်းဘုတ်အကြီးကြီး ရေးထားတဲ့ဆိုင်က ခပ်ကျယ်ကျယ် သိချင်းဖွင့်သံလေး
“ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်... တပ်မတော်ဖွဲ့ ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်...
တကယ်ဘဲ အသက်နဲ့ လဲလို့ ... ဆင်းရဲဒုက္ခခံကာ ကြံစည်တယ်...
သူရဲကောင်းတဲ့... ဗိုလ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်တွေရယ်...” တဲ့.....။
(ပြည်သူ့ ခေတ်ဂျာနယ် အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၆၁ မှ ကျော်ကျော် ၏
“ရဲဘော်သုံးကျိပ်ကို ထိန်ပင်သုသာန်က လှိုင်သာယာ အမှိုက်ပုံဘေးမှာ
ပြန်လည်တွေ့ ရှိခြင်း” မှ ကူးယူပါသည်)
မလေးရှားမှ ပြန်လာလိုသည့် မြန်မာများအတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် အခမဲ့ပေးမည်
မလေးရှားမှ ပြန်လာလိုသည့် မြန်မာများအတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် အခမဲ့ပေးမည်၊ သီတဂူ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့် MAI တို့ပူးပေါင်းပြီး လေယာဉ် (၃) စင်းစာ စီစဉ်ပေးမည်
ဂါးရက်ဘေးလ် ၁၄ ရက်မှာ ကစားမယ့် ဗီလာရီးယဲလ်နဲ့ ပွဲမှာ ရီးယဲမက်ဒရစ်အတွက် ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ အာမမခံနိုင်ပါ
စတာလင် ပေါင် ၈၅.၃ သန်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ဘောလုံးသမားအဖြစ် စံချိန်တင်ထားတဲ့ ဂါးရက်ဘေးလ်ဟာ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်မှာ ကစားမယ့် ဗီလာရီးယဲလ်နဲ့ ပွဲမှာ ရီးယဲမက်ဒရစ်အတွက် ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ အာမမခံနိုင်ပါဘူးလို့ ရီးယဲ လက်ထောက်မန်နေဂျာ ပေါလ်ကလီးမန့်က ပြောပါတယ်။
ရီးယဲမှာ နေရာရဖို့ အပြိုင်အဆိုင်တွေ များတာကြောင့် ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ ဘယ်သူ့မှာမှ အာခံချက်မရှိဘူးလို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
အိန္ဒိယကွန်ပျူတာကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ အသက်-၂၁ နှစ်အရွယ် Subhanjan Saha ဟာလူမဲ့ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ Drone ကိုတီထွင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်
လက်ရှိ Manindra Chandra College မှာကွန်ပျူတာဘာသာရပ်တက်ရောက်
သင်ကြားနေတဲ့ Saha ကို ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သုတေသန(DRDO) နှင့် Hindustan Aeronautics Limited (HAL) တို့မှ
Drone ကိုအဆင့်မြင့်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်အောင် ဆက်လက်ထောက်ပံ့
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အနာဂတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံ စစ်ရေးအရ၊တိုးတက်စေဖို့နဲ့
ကနဦးတီထွင်ဖန်တီးမူအရ Remote နဲ့ထိန်းချုပ်ပျံသန်းရမှာဖြစ်ပြီး ရှေ့ကင်
မရာ၊နောက်ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည့်အပြင် မြေပြင်မှပုံရိပ်ကို ဝေဟင်
အမြင့် ၁၀ ကီလိုမီတာ မှနေ၍ပုံရိပ်များကို ဖမ်းယူကြည့်ရှုလို့အဆင်ပြေစေ
ဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပြီး အားပြည့်စွာသွင်းထားပါက ပျှမ်းမျှ
မိနစ် ၆၀ အထိကြာမြင့်စွာပျံသန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သူ့ရဲ့ တီထွင်မူနဲ့ပတ်သက်ပြီး Saha ကယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျွန်တော်ဟာ စက်ကရိယာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ပတ်သက်တဲ့ ချိတ်ဆက်ဖန်တီးမူတွေကိုလည်း ဝါသနာပါတဲ့အတွက် လေ့လာ
ထားတဲ့ ပညာရပ်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ယခုလိုဖန်တီးတာပါ။ခင်ဗျားလည်း သိတဲ့ အတိုင်းပဲ အိန္ဒိယမှာက လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပိုပစ္စည်းတွေကဈေးအရမ်း
ကြီးတယ်လေ။ဒါကြောင့် အွန်လိုင်းမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အကူအညီ
ကိုယူပြီး အင်တာနက်ကနေ လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အော်ဒါမှာယူရတာ
အခုတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။အနာဂတ် တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးနဲ့ စစ်ရေးတွေမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ Drone
အိန္ဒိယအလံဒီဇိုင်းနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ Drone နှင့်အတူ အသက်-၂၁ နှစ်အရွယ်
ကျောင်းသားလေးဖြစ်တဲ့ Subhanjan Saha ကိုယခုလိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။